I-Golfer Dottie Pepper: I-Biography, Facts and Figures
U-Dottie Pepper wayengumdlali okhuselekileyo kunye nobunzima be-LPGA ukunqoba kwaze kwaba yilapho ukulimala kuye kwanciphisa umsebenzi wakhe. Emva koko wangena umsebenzi ophumelelayo njengentengiso yegalufa.
Umhla wokuzalwa: Agasti 17, 1965
Indawo yokuzalwa: Saratoga Springs, NY
Igama lomnxeba: I- Hot Pepper
I-LPGA Tour Win: 17 (ibhalwe emva kwe-Pepper's bio ngezantsi)
IiMidlalo ezinkulu: 2
UNabisco Dinah Shore: Ngo-1992, 1999 (le ntsebenzo ngoku ibizwa ngokuba yi-ANA Inspiration)
Amabhaso kunye neMbeko kwiDottie Pepper
I-LPGA Vare Trophy (i-average score score), ngo-1992
Umlawuli wezimali we-LPGA, ngo-1992
LPGA Umdlali wonyaka, ngo-1992
Ilungu, iqela le-US Solheim Cup, 1990, 1992, 1994, 1996, 1996, 1998, 2000
Isikolo se-3-time collegiate All-American
I-Pepper ngokudlala phantsi kwelokulwa kwakhe ngo-1992 uNabisco Dinah Shore: "Ndandinomdla obunzima gqitha wokuba ndiyiphumelele.
Dottie Pepper Trivia
Ukususela ngo-1988 ukuya ku-1995 wancintisana noDottie Mochrie.
Ukugqitywa kwe-19-ngaphantsi kwe-1999 kwi- Kraft Nabisco Championship kwaba ngowokuqala-19 ekugqityweni kwimbali yobukhosi, amadoda okanye abafazi. Wabelana ngerekhodi yamanqaku aphantsi kakhulu ngokubhekiselele kwi-Jason Day ukuya kwi-20-ngaphantsi kwe-PGA Championship ka-2015. Irekhodi yePipper yeLPGA ayizange iwele ngo-2016.
Biography yeDottie Pepper
UDottie Pepper wayengumncintiswano onobukrakra, engesabi ukuvumela iimvakalelo zakhe zibonise kwikhosi.
Waqala ukudlala eshushu njengoko ubungqina bakhe kwaze kwaba yilapho umsebenzi wakhe waphelelwa ngethuba luchungechunge lokulimala.
Umsebenzi wePepper waqala ngokunqoba okukhulu kwe-amateur kwimeko yakhe yasekhaya eNew York, uzuze i-amateur yesizwe ka-1981 kunye no-1981 no-1983. Wayeyilungu leqela lika-1981 le-Junior yeNdebe yeHlabathi kunye ne-amateur ephantsi kwi-1984 US Women's Open .
Waye kwiYunivesithi yaseFurman apho wayebizwa ngokuba yi-All-America kathathu, emva koko waphenduka waza wajoyina iLPGA Tour ngo-1987.
Ukuphumelela kokuqala kukaPepper kwafika kwi-Oldsmobile LPGA Classic ngo-1989 kwi-5-hole engxowankulu yokuphumelela phezu kweBhete Daniel .
Ekuqaleni komsebenzi wakhe, u-Pepper's temperament akazange ahlale ehamba kakuhle nabanye abadlali. Kwamanye amaxesha wayebhekwa njengongenangqondo okanye omeyile, umntu owayengahlali ehloniphekileyo okanye ezopolitiko. Abanye bamncintisana nabo bamthiwa ngu "Snottie Dottie" ngeli xesha.
Wayehlala ehlanjululwe kwiminyaka kamva, kodwa lo mlilo uhamba kakuhle kunye nabalandeli kwaye wakhiqiza igorfu enkulu. I-Pepper yathi ibokuqala kweentloko zakhe ezimbini - ukubetha enye iHolo yeNerer ngokukhawuleza, ngeli xesha u- Juli Inkster - ngo-1992 uNabisco Dinah Shore (i-LPGA enkulu kamva yabizwa ngokuba yi-Kraft Nabisco Championship kwaye ngoku i-ANA Inspiration).
Wawunqoba kwakhona eso siganeko ngo-1999 kunye nenqaku lokubeka irekhodi eli-19-ngaphantsi kwe-- namanqaku amanqanaba aphantsi kakhulu ngokubhekiselele kuyo nayiphi na i-LPGA okanye i-PGA Tour enkulu.
I-Pepper yayiyimpumelelo eqhubekayo kuma-1990s, ekhokela ukutyelela ekuphumeleleni ngo-1992 no-1996, ngemali kunye nokufaka amanqaku ngo-1992, kwaye ayigqibekanga ngaphantsi kwesihlanu kwimali evela ngo-1991-96.
Kwakhona wayengomnye wabadlali abakhulu kwiminyaka elishumi yokuqala yeNdebe yeSolheim , ukunyamezela kwakhe kumkhonze kakuhle kuloo mqathango (nangona ingahlali ihamba kakuhle kunye nabachasi bayo kumaqela aseYurophu).
Wabhala irekhodi elipheleleyo le-13-5-2 kwimidlalo, kubandakanywa iinqununu ezintlanu kwiimidlalo ezi-6 ezingabonakaliyo.
Kodwa uchungechunge lokulimala lwaqala ukunyuka kangangokuba ekugqibeleni lanyanzelisa umhlalaphantsi. I-Pepper yayingabikho iiveki ezintandathu ngo-1995 kunye nekhenketti ye-rotator kunye ne-thoracic back sprains. Ulahlekelwe ubuninzi be-2000 ngesandla kunye nokulimala emva.
Ngo-2002, wadlala kanye kuphela kwaye wafuna ukuhlinzwa kwegulane. Wahlala phantsi emva kwexesha le-2004.
Xa iintsuku zakhe zephuphiswano zaphela, uPepper waphendukela ekusasazeni. Wayesebenza kwiSiteshi seGalofu nakwizemidlalo ze-NBC, zombini kwidokodo njengomhlalutyi kunye nomlobi wegolfu.
Ngonyaka ka-2012 waqala ukubhala iincwadana zeencwadi zabantwana; Uchungechunge lubizwa ngokuba yiBegey Tees Off kwaye iincwadi zisebenzisa iibhola zegalufa ukufundisa abantwana ukuba baxabiseke njengokunyaniseka.
Iipuphu zePPpper zeLPGA Tours
1992 uNabisco Dinah Shore
Ngowe-1992 uSega Women's Championship
1992 I-Sun-Times Challenge
I-World Championship ye-Women's Golf ye-1993
Ngo-1994 uChrysler-Plymouth Tournament of Champions
I-PING / Welch Championship ka-1995
Ngo-1995 uMcCall weLPGA Classic
1996 eRochester International
1999 uNabisco Dinah Shore
Ulwahlulo olungenanto lwama-Arch ka-2000
In Astrology Kuthetha ntoni ukuba iSaturn iLibra
Iinkonzo kunye neNgxowa ye-Major Pointe Shoe Brands
Xelela uBrak - iMesopotamian Capital in Syria